Maamulka Gobolka Nugaal iyo Mulkiilayaasha Gaadiidka Bajaajta oo Kulan Yeeshay – Radio Daljir
Abriil 7, 2017 3:51 b 0
Xarunta gobolka Nugaal ee magaalada Garoowe ayaa maanta waxaa kadhacay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen maamulka gobolka, kan degmada, mulkiilayaasha iyo wadayaasha gaadiidka Barwaaqo (Bajaaj).
Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne, gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida iyo dembiyada culus ee shanta gobol, xoghayaha dowladda hoose, nabadoono, mulkiilayaasha iyo wadayaasha gaadiidka Bajaajta (Barwaaqo).
Maamulka, mulkiilayaasha iyo gaadiidleyda Bajaajta oo ka hadlay madasha ayaa soo bandhigay cabashooyin kala duwan oo ay tabanayaan, waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay xoghayaha dowladda hoose ee degmada Garoowe.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo ugu dambayntii soo xiray shirka ayaa soo jeediyey qodobo dhowr ah oo lagu heshiisyey, wuxuuna balanqaaday in la ilaalin doono ganacsatada bajaajta ayaguna sharciga dhowraan.
Heestii Daahfur iyo Mashruuca Ballaarinta Dekedda Boosaaso (DAAWO)